के साँच्चै माधव समूह एमालेमा बस्न चाहँदैन? « AayoMail
के साँच्चै माधव समूह एमालेमा बस्न चाहँदैन?
नेकपा एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहका १७ सांसदले केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मत दिएपछि नेकपा माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाएको छ।
मंगलबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा एमालेको नेपाल–खनाल समूहका सांसदले पार्टी ह्विपविरुद्ध गएर मत दिएका छन्। जसले भट्टको सरकार जोगिएको छ।
सुदूरपश्चिममा एमालेले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर नेपाल–खनाल समूहको बहुमत रहेको संसदीय दलले भने पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा ७ सांसदले केन्द्रको निर्देशन मानेका छन् भने १७ जनाले संसदीय दलको।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि एकता आह्वान गरिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा देखिएको दृश्यले एमाले विवाद झनै पेचिलो बन्ने संकेत दिएको छ।
‘एकताका लागि अध्यक्ष आफैं लचक भएर आह्वान गर्नु भएको छ। तर त्यसमा बसेर संवाद गर्नुको सट्टा माधव कमरेड प्रदेश–प्रदेशमा विपक्षीलाई सहयोग गर्दै हिड्नु भएको छ, उहाँ त्यसैमा रमाएको देखिन्छ,’ ओलीका विश्वासपात्र एक नेताले आयोमेलसँग भने, ‘यसरी एकता प्रक्रिया कसरी सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ? यसले त माधव कमरेड एमालेमा बस्नै नचाहेकै देखिएको छ।’
संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्विप उल्लंघन र फ्लोर क्रस दण्डनीय हुने भन्दै ती नेताले कारबाहीलाई समेत बेवास्ता गरेर एकताका लागि आह्वान भइसकेको अवस्थामा आफ्नै पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्नुले माधव नेपालहरुको नियत प्रष्ट भएको बताए।
तर नेपाल–खनाल समूह भने सुदूपश्चिमको विषयलाई केन्द्रसँग जोड्न नहुने बताउँछ।
उक्त समूहका एक प्रभावशाली नेता भीम रावलले संसदीय प्रणालीमा संसदमा हुने कारबाहीमा संसदीय दलको ह्विप आकर्षित हुने बताउँछन्।
एकताका लागि अध्यक्षले आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केन्द्रको निर्णय नमान्नाले विवाद समाधानको प्रक्रिया झनै पेचिलो बनाउँदैन? भन्ने आयोमेलको प्रश्नले रावलले भने, ‘प्रदेशको कुरा प्रदेशमा हुन्छ, केन्द्रको केन्द्रमा।’
के साँच्चै नेपाल–खनाल पक्ष एमालेमा रहन चाहँदैन?
एकताका लागि अध्यक्ष आफैं लचक भएर प्रस्ताव अघि बढाउँदासमेत नेपाल–खनाल पक्ष सकारात्मक नबन्नुले उनीहरु एमालेमा रहनै नचाहेको देखाएको ओली पक्षको बुझाइ छ।
एकता प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीले राखेको सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ताको विषयलाई उनीहरुले कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने भन्दै ओलीले मुद्दा प्रभावित पार्ने षडयन्त्रअन्तर्गत प्रस्तावको कार्ड फ्याँकेको बताउँदै आएका छन्।
तर ओली पक्ष भने एक ढिक्का भएपछि पनि आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा रिट दिने विषय शोभनीय नहुने बताउँछ। ‘उहाँहरुले राखेका सबै माग पूरा गर्न अध्यक्ष कमरेड तयार हुनुहुन्छ। २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्कन्छु पनि भनिसक्नुभयो,’ ओलीनिकट अर्का एक नेता भन्छन्, ‘भोलि सबै कुरा मिल्ने अवस्था बन्यो। बार्ता मिल्यो र एमाले एकढिक्का हुँदा सर्वोच्चमाचैं निवेदन भइराख्नाले कस्तो सन्देश दिन्छ? पार्टी चाहिने तर पार्टीको सरकार नचाहिने?’
यता एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने अध्यक्षद्वारा जारी एकता आह्वान र ६ बुँदे प्रस्ताव निरन्तरको चलाइएका छलफलकै परिणाम रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार दुवै पक्षबीच भएको छलफलकै आधारमा एकताको प्रयासस्वरुप अध्यक्ष ओलीले आह्वान गरेका हुन्।
‘यो एकताका लागि गरिएको प्रयास हो। यो प्रयास हामीबीच निरन्तर चलाइएको छलफलको परिणाम हो। सिंगो पार्टीपंक्ति, सिंगो देशको यसप्रति सकारात्मक संवेदनशीलता छ, र यो प्रयास हाम्रो जारी रहन्छ,’ नेम्वाङले आयोमेलसँग भने।
तर आफूहरुबाट भएका एकता प्रयासमा केही नेताको अनिच्छा देखिएको उनको जिकिर छ। नेता नेम्वाङले तिनका विषयमा भने केही टिप्पणी गर्न चाहेनन्। ‘अब जो एकतामा आउनुहुन्न वा एकताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुका बारेमा कुनै टिप्पणी छैन,’ नेम्वाङले भने।
यता नेपाल–खनाल समूह भने शर्तले एकताको ढोका बन्द गरेको ठान्छ। ‘एकता नगर्नकै लागि उहाँले हामीले नगर्ने कुराको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ। जसको मतलब उहाँ एकता गर्न चाहेको देखाउने तर ढोका भने नखोल्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ, यसले एकता गर्ने भन्दा भड्काउने अवस्था बनाएको छ,’ नेपाल–खनाल पक्षका एक नेताले भने।